Docker vs Kubernetes: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka labadaba | Laga soo bilaabo Linux
Isaac | | Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
La Wax ku oolnimada ayaa noqotay dhaqan aad u caan ah, gaar ahaan adeegyada daruuriga ah si aad awood ugu yeelatid wax badan oo ka mid ah server-yada xarumaha xogta. Laakiin waayadan dambe, wax-ku-oolnimada weelka ku salaysan ayaa ah kan la soo rogay, maaddaama ay u oggolaanayso maamul aad waxtar badan u leh (iyada oo aan loo baahnayn in la nuqulo hababka qaarkood) Waana xilligan ugu sarreeya ee dagaallada Docker vs Kubernetes ay soo baxayaan.
Laba mashruuc oo aad caan u ah, oo aad u badan tahay inaad hore u ogtahay. Labadaba leh faa iidooyinkeeda iyo qasaaraheeda, iyo kala duwanaanshaha taasi waxay fure u noqon kartaa markay kaa caawineyso inaad ku doorato mashruuc hadba baahidaada ...
1 Waa maxay waxtarka ku saleysan weelka?
2 Waa maxay Docker?
3 Waa maxay Kubernetes?
4.1 Kaladuwanaanshaha Kubernetes
4.4 Docker vs Kubernetes: Gunaanad
Waa maxay waxtarka ku saleysan weelka?
Sidaad ogtahay, waxaa jira dhowr noocyada hufnaantasida hawlkarnimo buuxda, paravirtualization, iwm. Hagaag, qaybtaan waxaan diirada saari doonaa hufnaan buuxda oo guud ahaan loo isticmaalo marka laxirayo mashiinnada dalwaddii, iyo konteynarrada, si aan loogu soo bandhigin doorsoomayaal kale oo adiga ku wareeri kara.
Mashiinnada farsamada- Waa dariiqa lagu gaadho xuddun-u-yeelashada wax-qabad. Waxay ku saleysan tahay hypervisor, sida KVM, Xen, ama barnaamijyo sida VMWare, VirtualBox, iwm. Qalabkan kombiyuutarka, mashiin jireed oo dhameystiran (vCPU, vRAM, disk drives, shabakadaha dalwaddii, meelaha durugsan, iwm.) Sidaa darteed, nidaam hawlgal (marti) ayaa lagu rakibi karaa qalabkan farsamada gacanta oo laga bilaabo, codsiyada waa la rakibi karaa oo loo maamuli karaa si la mid ah sidii lagu samayn lahaa nidaamka hawlgalka martida loo yahay.
Kunteenarada: Waa farsamo kale oo nooc ka mid ah qafis ama sanduuqa ciidda lagu soo daro kaas oo qaybo ka mid ah nidaamkan dhammaystiran lagu qaybin karo, kaas oo ka waxtar badan isla markaana leh xoogaa la qaadan karo iyo faa'iidooyin ammaan oo dheeri ah (in kasta oo aanu ka madhnayn nuglaanta). Xaqiiqdii, halkii aad kaheli lahayd hypervisor, kiisaskaas waxaa jira softiweer sida Docker iyo Kubernetes oo u adeegsan doona nidaamka martigeliyaha laftiisa inuu ku maamulo barnaamijyada go'doonsan. Faa'iido darrada ayaa ah inay kuu oggolaanayso oo keliya inaad ka soo dirto barnaamijyada asaasiga ah barnaamijka 'OS' laftiisa. Taasi waa, intaad ku jirto VM-ka waxaad ku shaqeyn kartaa Windows on Linux distro, tusaale ahaan, iyo Windows-ka waxaad ku ordi kartaa barnaamij kasta oo asal ah oo loogu talagalay, weelka waxaad ku sameyn kartaa oo keliya barnaamijyada ay taageerayaan nidaamka martigeliyaha, tan dacwada Linux ...
Xusuusnow in kordhinta ama taageerada Awood u yeelashada qalabka, sida Intel VT iyo AMD-V waxay ku guuleysteen inay wax badan hagaajiyaan waxqabadka, iyagoo u maleynaya kaliya 2% CPU dusha sare. Laakiin taasi ma khusayso ilaha kale sida xusuusta ama kaydinta lafteeda oo loo qoondeeyay awoodsiin buuxda, taas oo macnaheedu yahay dalab dhaqaale oo aad u tiro badan.
Waxaas oo dhami waa waxa weelasha u yimaadaan si ay u xalliyaan, taas oo ah uma baahnid inaad nuqul ka sameysid howlaha qaarkood inaad awood u leedahay inaad dirto codsi. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku sameysato weel leh server Apache, oo leh mashiinka farsamada oo dhameystiran waxaad lahaan laheyd nidaamka hawlgalka martigeliyaha, hypervisor, nidaamka hawlgalka martida, iyo barnaamijka adeeggaas. Dhinaca kale, weelka waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato softiweerka fuliya adeegga la yiri, maaddaama oo uu ku dhex shaqeyn doono "sanduuq" gooni ah oo uu adeegsanayo nidaamka hawlgalka martigeliyaha laftiisa. Taas ka sokow, bilawga barnaamijka ayaa aad uga dhakhso badan, iyadoo laga takhalusi doono OS-ka martida ah.
Waa maxay Docker?
Docker waa mashruuc il furan, oo hoos yimaad liisanka Apache, oo ku qoran luuqadda barnaamijka `` Go '' oo loo adeegsado si otomaatig ah loo geeyo arjiyada kontaynarrada dhexdooda. Si kale haddii loo dhigo, softiweerkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku maamusho konteynarrada nidaamyada kala duwan ee hawlgalka, maaddaama ay ka shaqeyso dhowr meelood.
Markuu Docker soo muuqday, waxay lahayd faa iidooyin badan, oo si dhakhso leh ayuu u faafay. Aragtida go'doonsan ee nidaamka qalliinka iyo fudeydka, ayaa loo oggol yahay in lagu dhiso konteynarro ay ku jiraan barnaamijyo, lagu hirgeliyo, lagu miisaamo, oo si dhakhso leh loo fuliyo. Dariiq loo furo dhammaan barnaamijyada aad u baahan tahay ugu yaraan isticmaalka kheyraadka.
Soo koobid, Docker wuxuu bixiyaa waxyaabaha soo socda sifooyinka fure:
Ka go'doomin deegaanka.
Goobta / Xiriirinta.
Laakiin kama madax banaanayn dhibaatooyinka qaarkoodSida markii konteenarradan ay ahayd inay iswaafajiyaan, wada xiriiraan midba midka kale. Tani waxay ahayd mid ka mid ah sababihii keenay abuuritaanka Kubernetes ...
Sida aan gadaal ka faalloon doono Docker raxan, Waxaan jeclaan lahaa in aan ka faalloodo in ay tahay barnaamij ay abuureen isla kuwa wax dhisa ee Docker in ay awoodaan in ay koox koox oo taxane ah u abaabulaan kooxda Docker isla markaana ay sidaas u maareeyaan qeybaha dhexe, marka lagu daro abaabulka weelasha.
Inbadan oo ku saabsan Docker
Waa maxay Kubernetes?
Waxaa asal ahaan abuuray Google, markii dambena waxay ugu deeqday Cloud Native Computing Foundation. Kubureteska Sidoo kale waa nidaam u eg Docker, ilo furan, shati ka haysta Apache, laguna qoro iyadoo la adeegsanayo luqadda barnaamijka Go. Waxaa loo adeegsadaa si otomaatig ah geynta iyo maaraynta codsiyada konteynarrada ku jira. Intaa waxaa dheer, waxay taageertaa deegaanno kala duwan oo loogu talagalay weelasha lagu ordo, oo ay ku jiraan Docker.
Ugu dambeyntii, Kubernetes waa a madal orchestration konteynarrada mas'uulka ka ah caawinta weelasha kala duwan ee mashiinnada kala duwan, maamulkooda, iyo xamuulka u dhexeeya. Gaar ahaan waa hay'adda ka dhigtay mashruucan qayb muhiim ah noocyada noocan ah ...
Jadwalka otomaatiga ah.
Ka bixitaano otomaatig ah iyo dejin.
Isku dheelitirnaanta xamuulka iyo miisaanka jiifka ah.
Cufnaanta sare ee ka faa'iideysiga kheyraadka.
Hawlaha ku jihaysan bay'adaha ganacsiga.
Maareynta arjiga dhexe.
Kaabayaasha is-miisaami kara.
Inbadan oo ku saabsan Kubernetes
Sida aad ku arki karto qeexitaanka, labaduba siyaabo badan ayey iskaga mid yihiin, laakiin adigu waad leedahay khilaafaadkooda, iyo sidoo kale inay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo waxyeellooyinkooda sida wax walba. Waxaad u maleyn kartaa inaad garaneyso faahfaahintaan waxaad heli laheyd wax walba oo aad ku ogaan laheyd midka aad dooran laheyd, iyadoo kuxiran ujeedada aad leedahay.
Si kastaba ha noqotee, dhibaatada waa wax intaas ka sii adag. Maaha arrin ku saabsan Docker vs Kuernetes, maxaa yeelay waxay la mid noqonaysaa isbarbar dhigga waxyaabo aad u kala duwan waxaadna ku dhici doontaa qaladka fekerka ah inaad mid ka doorato midka kale. Natiijada Docker vs Kubernetes waa wax aan macquul ahayn, halkii aad isku xiri lahayd labada teknoolojiyad si aad u awood u yeelato inaad u gaarsiiso oo aad u cabirto codsiyada weelka ku jira si ka wanaagsan.
Tan ugu habboon ayaa noqon doonta in la isbarbar dhigo Docker Swarm oo leh Kubernetes. Taasi way guuleysan laheyd, maadaama Docker Swarm uu yahay tiknoolajiyad abaabul Docker oo loogu talagalay abuurista kooxo kooxo ah oo loogu talagalay weelasha. In kasta oo, xitaa markaa aysan noqon doonin mid gebi ahaanba guuleysata ... Xaqiiqdii, Kubernetes waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso koox koox ah, iyadoo awood u yeelanaysa inay isku dubarido koox-kooxeedyada qanjidhada miisaanka wax-soo-saarka si hufan, halka Docker uu ku sameeyo qaab keliya.
Kaydinta kuwa kala duwan, haddii aad rabto inaad ogaato kaladuwanaanta inta udhaxeysa Docker Swarm iyo Kubernetes, waxay noqon lahaayeen:
Kubernetes waxaa ku jira xulashooyin badan oo loogu talagalay shakhsi ahaaneed ka maqan Docker raxan.
Docker Swarm waa ka fudud si loo habeeyo fududaanteeda darteed. Intaa waxaa dheer, sidoo kale way fududahay in lagu dhex daro nidaamka deegaanka ee Docker.
Taabadalkeed, Dulqaadka cilladda Kubernetes waa ka sareeysaa, taas oo ku fiicnaan karta jawiga sida server-yada aadka loo heli karo.
Docker Swarm waa dhakhso ku saabsan dejinta iyo ballaarinta konteenarrada.
Kubernetes qaybteeda ayaa bixisa dammaanad qaad ka weyn gobolada.
El dheelitirka culeyska Kubernetes waxay kuu oggolaaneysaa isku dheelitirnaan ka wanaagsan, in kasta oo aysan otomaatig ahayn sida Docker oo kale.
Kubernetes ayaa bixisa dabacsanaan ka fiican, xitaa codsiyada adag.
Docker Swarm wuxuu taageeri lahaa illaa 2000 burooyinka, marka loo eego 5000 oo ku saabsan Kubernetes.
Kubernetes waa filaayo kooxo badan oo yaryar, halka Dockers loogu talagalay koox kooxeed ballaaran.
Kubernetes waa dhib badan, Docker ka fudud.
Kubernetes way oggolaan kartaa wadaag meelaha kaydinta inta u dhexeysa weel kasta, halka Docker uu aad u xadidan yahay oo kaliya la wadaago inta udhaxeysa konteynarrada isku qolka ku jira.
Docker Swarm wuxuu u oggol yahay inuu isticmaalo software saddexaad qorista iyo la socoshada, Kubernetes waxaa ku jira qalab ay ku dhex dhisan tahay.
Docker Swarm wuxuu ku egyahay 95.000 weelasha, halka Kubernetes ay taageeri karto ilaa 300.000.
Halka Docker leeyahay beel weyn Kubernetes sidoo kale waxay taageertaa shirkadaha sida Microsoft, Amazon, Google, iyo IBM.
Docker waxaa isticmaala shirkadaha sida Spotify, Pinterest, eBay, Twitter, iwm. Halka Kubernetes doorbidayaan 9GAG, Intuit, Buffer, Evernote, iwm.
Markaan aragnay kaladuwanaansho, hadda ayaa markiisa la leeyaha faa'iidooyinka mid kasta:
Abaabul fudud oo adeegga leh jiingado.
Waxaa soo saaray Google, khibrad balaaranna u leh warshadaha daruurta.
Bulsho aad u tiro badan iyo qalab abaabul konteenarro.
Kala duwanaanshaha xulashooyinka kaydinta, oo ay ku jiraan SANs maxalliga ah iyo daruuraha dadweynaha.
Dejin bilow ah oo hufan oo fudud.
Aan kuu ogolaano inaad raad raacdo noocyada weelka si aad u baarto kala duwanaanshaha.
Dukumiinti aad u wanaagsan.
Go'doon fiican oo u dhexeeya barnaamijyada.
Sida for faa'iido darrooyinka:
Socdaal badan oo kakan.
Nidaaminta qaabeynta qaabeynta iyo qaabeynta.
La jaan qaadi karin aaladaha hadda jira ee Docker.
Hirgelinta koox kooxeed waa mid adag.
Ma siineyso xulasho keyd ah.
Majiro dib-u-qaabayn otomaatig ah oo noodhadh la'aan ah.
Ficillada waa in lagu sameeyaa CLI.
Maareynta Buugga ee dhacdooyin badan.
Waxaad ubaahantahay taageero qalab kale.
Hawlgalinta koox-kooxeedka isku-dhafan ee isku-dhafan.
Ma jiro wax taageero ah oo lagu hubinayo caafimaadka.
Docker waa shirkad faa'iido doon ah iyo qaybo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah, sida Docker Engine iyo Docker Desktop, ma aha il furan.
Docker vs Kubernetes: Gunaanad
Sida aad qiyaasi karto, ma fududa in la doorto u dhexeeya mid ama midka kale. Dagaalkii Docker vs Kubernetes wuu ka dhib badan yahay sidii ay u muuqan lahayd. Wax walbana waxay ku xirnaan doonaan ujeedada aad leedahay. Mid ama ka kale ayaa ku habboonaan doona, taasna waa inay noqotaa xulashadaada.
Xaalado kale oo badan, isticmaalka Kubernetes ee leh Docker ayaa noqon doona kan ugu fiican dhammaan xulashooyinka. Labada mashruucba si fiican ayey u wada shaqeeyaan. Tani waxay hagaajin kartaa amniga kaabayaasha iyo helitaanka codsiyada sare. Xitaa waxaad ka dhigi kartaa barnaamijyo badan oo la qaadi karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Shabakado / Adeeg » Docker vs Kubernetes: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Aad baad u mahadsantahay! Waxay ii sii caddaaneysaa aniga, iyo wixii ka sarreeya oo dhan in la fahmo in sidii marar badan, aysan jirin wax ka fiican ama ka xun, haddii aysan ahayn arrin la doorto midka ugu habboon.
Waxaa laga yaabaa inaan kaliya u baahanahay tusaale cad si aan u fahmo seenyada mid ama tan kale ay sifiican u shaqeyso, iyo hadii ay dhacdo inaan wada isticmaalo.
Sidoo kale, waa maxay beddelka aan ku haysanno nooca software-ka ah?
Maxayse adeegsanaysaa annaga bilowga ah inaan wax ka ogaanno weelasha, inaan aragno kiisaska dhabta ah annaga oo aan sugin ka shaqeynta shirkadaha waaweyn?
Erikson Melgarejo dijo
Waxaan u maleynayaa in wax si khalad ah loogu qeexay halkaan, docker waa maamule konteenar, looma barbar dhigi karo Orchestrator.
Isbarbardhiga wuxuu udhaxeyn doonaa Docker Swarm vs Kubernetes.
Sida muuqata intii lagu guda jiray sameynta qoraalkan cajiibka ah (runti xiiso badan ayaan qabaa ra'yigeyga), ereyada qaarkood waa laga gudbay.
Jawaab Erikson Melgarejo
Febraayo 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
WhatsApp wuxuu sharxayaa waxa dhici doona haddii aysan aqbalin shuruudaha cusub ee adeegga